Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny antsasaky ny mponina any UK dia manomana fitsangatsanganana maromaro amin'ny taona manaraka
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny varotra dia mitatitra fitakiana miparitaka be amin'ny dia mandritra ny areti-mifindra ary izany dia nasehon'ny fiakaran'ny tahan'ny famandrihana isaky ny mihena ny fameperana.
Ny antsasaky ny Brits dia manomana fialantsasatra roa na maromaro amin'ny 2022 - ary 70% no mikasa ny haka fialan-tsasatra iray farafahakeliny amin'ny herintaona, araka ny fikarohana navoaka androany (1 Novambra) nataon'ny WTM London, hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny dia.
Fanampin'izay, mpanjifa efatra amin'ny 10 no mikasa ny handany fialantsasatra bebe kokoa noho ny tamin'ny taona 2019, hoy ny tatitra nataon'ny WTM Industry.
Ny fitsapan-kevitry ny mpanjifa 1,000, navoaka androany tao amin'ny WTM London, dia nahita fa 16% fotsiny no tsy mikasa ny hiala mihitsy, raha 22% kosa no milaza fa hanana fialantsasatra iray izy ireo amin'ny 2022.
Ny fahatelo (29%) dia nilaza tamin'ny mpanao fitsapan-kevitra fa nanomana fialantsasatra roa izy ireo - anisan'izany ny fiatoana fohy ary koa ny fialan-tsasatra lava kokoa - raha 11% kosa no nilaza fa manantena ny haka telo. Saika ny iray amin'ny 10 (9%) no nilaza fa mikasa ny haka fialan-tsasatra telo mahery izy ireo.
Raha ny momba ny drafitra fandaniana fialan-tsasatra dia 43% no mikasa ny handany mihoatra noho ny tamin'ny taona 2019 ary latsaky ny iray amin'ny 10 (9%) no nilaza fa handany latsaky ny tetibola 2019.
Saika ny iray amin'ny enina (17%) no nilaza tamin'ny fanadihadiana fa handany "mihoatra ny 2019" izy ireo - amin'ny sisin'ny 20% na mihoatra - raha ny ampahefatry ny (26%) kosa no nanombana fa handany bebe kokoa - hatramin'ny 20% mihoatra ny 2019. .
Ny fahatelo dia nilaza fa handany mitovy amin'ny talohan'ny valan'aretina izy ireo.
Ny valin'ny mpanjifa dia tohanan'ny fikarohana eo amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran-tany, ka efa ho ny antsasany (44%) amin'ireo orinasa 676 nanontanian'ny WTM London dia nilaza fa hahatratra na mihoatra ny haavon'ny famandrihana hita amin'ny taona 2019 ny famandrihana azy ireo. Mbola hihemotra amin’ny taona 42 ny taona ho avy, raha 2019% kosa no tsy nahazo antoka na tsy nahalala.
Ny fikarohana dia tsara ho an'ny fanarenana ny indostrian'ny fitsangatsanganana any ivelany, izay milaza fa misy ny fitakiana mahery vaika amin'ny fialan-tsasatra aorian'ny areti-mifindra satria mora ny fameperana.
Miaraka amin'ny fitsangatsanganana any ivelany amin'ny taona 2020 sy 2021 izay ambany lavitra noho ny haavon'ny Covid, ny fanadihadiana dia manome fanantenana ho an'ny masoivoho, mpandraharaha ary zotram-piaramanidina fa hiverina haingana ny famandrihana rehefa mihamora ny dia.
Tamin'ny volana septambra, nilaza tamin'ny minisitry ny fitaterana Grant Shapps ny sampan-draharaha ara-barotra Airlines UK sy ny Fikambanan'ny Operators Seranam-piaramanidina fa ny fahavaratra 2021 dia "fahavaratra ratsy kokoa ho an'ny indostriantsika noho ny fahavaratra 2020", ary nampiany hoe: "Avela any UK na dia eo aza ny fandaharan'asa vaksiny manerantany. ”
Ny seranam-piaramanidina Heathrow, ohatra, dia nahita ny isan'ny mpandeha nidina 71% tamin'ny Aogositra 2021 raha oharina tamin'ny volana tampon'ny fahavaratra talohan'ny areti-mifindra.
Nidina avy amin'ny seranam-piaramanidina be mpampiasa indrindra any Eropa ny habaka London tamin'ny taona 2019 ho faha-10 satria niverina haingana kokoa ny mpifaninana.
Fanampin'izay, ny valim-pikarohana dia manakoako ny tondro tsena hita any an-kafa – nandritra ny fahavaratra, ny fikarohana mpanjifa ABTA dia nahita fa 41% no efa manana fialan-tsasatra any ivelany voafandrika mandritra ny 12 volana ho avy, ary 35% no namandrika fialan-tsasatra vahiny ho an'ity fahavaratra ity. Ireo isa ireo dia ambany noho ny mahazatra saingy mampiseho ny fijanonan'ny fitakiana ny dia, na dia eo aza ny toetr'andro sarotra.
Ary ny Hays Travel, masoivoho fitsangatsanganana lehibe indrindra any Angletera, dia nitatitra tombony tamin'ny volana Aogositra, noho ny ampahany amin'ny armada an'ny sambo mpitatitra izay manolotra sambo an-trano mandritra ny fahavaratra manodidina ny Nosy Britanika.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana WTM London, dia nilaza hoe: “Ny varotra dia mitatitra ny fitakiana miely patrana amin'ny dia mandritra ny areti-mifindra ary izany dia nasehon'ny fiakaran'ny tahan'ny famandrihana isaky ny mihena ny fameperana.
“Na izany aza, ny tsy fahatokisana sy ny fisafotofotoana momba ny fitsipiky ny dia dia nanakana ny ankamaroan'ny mpiala sasatra hatramin'izao.
"Miaraka amin'ny fanantenana bebe kokoa momba ny fisokafan'ny sisintany sy ny fanalefahana ny fameperana fitsangatsanganana, dia azo inoana fa ho tanteraka avokoa ireo drafitra fialan-tsasatra efa ela ireo, manome ny indostrian'ny sitrana rehefa miverina amin'ny fomba fitsangatsanganana mahazatra kokoa isika."